War farxad leh oo dhinaca dhaqaalaha ah oo usoo yeeray dowladda Somalia - Caasimada Online
Home Warar War farxad leh oo dhinaca dhaqaalaha ah oo usoo yeeray dowladda Somalia
War farxad leh oo dhinaca dhaqaalaha ah oo usoo yeeray dowladda Somalia
Muqdisho (Caasimada Online) Shirkadda Favori LLC oo ah shirkadda laga lee yahay dalka Turkiga ee dhawaan lagu wareejiyay maamulka garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan (Aadan Cadde), ayaa sheegtay in uu kor dhay dhaqaalaha dowladda ay ka hesho garoonka tan bishi September markaas oo maamulka garoonka lagu wareejiyay.
War-saxaafadeed ka soo baxay shirkadda Favori ayaa lagu sheegay seddaxdii bilood ee la soo dhaafay in qasnada dowladda ay ku dhacday 1.1 Milyan iyo shan boqol dollar, taasoo ka soo xarootay garoonka diyaaradaha Muqdish.
Axmed Katin oo ah madaxa Shirkada duulimaadyada FAVORI ayaa sheegay in ay ka go’antahay siddii ay gacan uga geesan lahaayeen horrumarka dalka Soomaaliya.
Waxaa uu sheegay in ay hadda wadaan ballaarinta Terminalka garoonka iyo dhabo cusub oo diyaaradaha ay soo degi karaan laga sameeyo garoonka.
War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in shirkada ay ka go’antay kor u qaadida dakhliga dowladda ka soo galo garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Shirkadda ayaa sheegtay tan iyo markii ay la wareegtay howsha garoonka seddax bil ka hor in dakhliga garoonka uu kordhay 50%, iyadoona sheegtay in ay fileyso ilaa bartamaha sannadka dambe ee 2014 in uu ku darsam 40% sida lagus heegay war-saxaafadeedka.
Shirkadda Favori ayaa sheegtay in ay ballaarin doonto mashaariicda ay ka wado garoonka diyaaradaha Muqdisho oo ay hadda adeegsadaan 42-shirkadood oo ah kuwa diyaaradaha.
Celcelis ahaan shirad cusub ayaa toddobaadkii ku soo biirta garoonka diyaaradaha Muqdishosod sida lagu sheegay war-saxaafaddedka.
Si kastaba, garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa hadda waxaa ka socda dhismo lagu doonayo in lagu casriyeeyo in xitaa diyaaradaha ay ka kici karaan habeenkii marka loo sameeyo nalalka garoonka lagana dhigo mid ka mid ah garoomada ugu casrisan waddamada caalamka.
Turkiga waa dowladda kaliye ee howllo dib u dhis ah ka wada dalka, waxa ay dib u dhiseen qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho ee ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay.